Tareen Travel kasoo horjeeddo Diyaarad Travel - taas oo Best? | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Tareen Travel kasoo horjeeddo Diyaarad Travel - taas oo Best?
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 27/03/2020)
Waxaa jira qaabab kala duwan ee gaadiidka la heli karo maanta ay u safreen Yurub, laakiin safarka tareenka oo ay kasoo horjeeddo safarka diyaaradda waa mid ka mid ah ugu xiisaha badan.
Si kastaba ha ahaatee, taas oo ah hab gaadiidka ugu fiican? at Save A tareenka, Annagu waxaannu nahay dabcan u janjeeraa dhinac iyo qabaa safarka tareenka in uu yahay by fog ka xoogbadan ah nooca gaadiidka! Read on hoose si aad u ogaato waxa ka wanaagsan oo aynu quusin galay post our safar tareen oo ay kasoo horjeeddo safarka diyaarada.
Safarka hawada ayaa hadda loo aqoonsaday inuu yahay kan sida ugu dhakhsaha badan ugu kordhinaya kululaynta adduunka. Ka fogaanshada diyaaradaha marka ay jiraan fudud beddeli kara in ay u safraan suurto gal ah waa waxa ugu weyn ee keli ah in qof kasta samayn karto si ay u dhinto raadkooda kaarboonka ay. wasaqowga hawada waa la dhimay si weyn by qaadashada tareenka ka badan diyaaradda. Inta badan wadamada Yurub, shabakadaha tareenka waa ballaaran iyo adeegyada waa soo noqnoqda, si aad u noqon karaan safraya bey'ada saaxiibtinimo oo aan allabari kasta.
Foggia in Tareenadu Bari
Florence si Tareenadu Bari
Naples si Tareenadu Bari
Rome si ay Tareenadu Bari
Dabacsanaanta safarka tareenka iyo safarka diyaaradda
Safrid diyaarad caadi ahaan ka dhigan tahay waa in aad ka aamin toddobaad kursiga aad, ama xitaa bilo, ka hor si aad u hesho qiimaha macquul ah.
Marka aad xaqiijisatay, kursigaagu, ma fududa in la beddelo duulimaad aad iyadoo la bixin lacagta weyn.
In kastoo qaar ka mid ah tareenada aad u baahan tahay si ay u sameeyaan Boos kursiga ka hor, waxaa jira dabacsanaan badan oo dheeraad ah, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay in la beddelo waqtiga aad rabtid inaad u safarto.
Haddaba la Save A Tareen xitaa haddii dhibcood qiimaha tigidhka ee, waxay kuu sheegi doona oo kaa caawinaya in aad is dhaafsadaan tigidhka qiimo jaban!
Bal qiyaas qaadashada safar oo aan haysan si ay u yimaadaan laba saacadood hore, saf ah ammaanka dheer, qiyaas baxay cabitaanno iyo jel aad, ama Siib Kabahaaga Adigu si loo baaro. Ku soo dhowow adduunka ee safarka tareenka. Marka aad u safri by hawada, Digtoonidiinna Duulana waqti iyo ammaanka dheeraad ah ayaa loo baahan yahay. Ku safrid tareen caadi ahaan waxaa loola jeedaa aad timaado karaa 30 daqiiqo ka hor waqtiga iyo si toos ah ugu socdaan si aad madal aan wax kaaftoomi oo uma baahna inay hubi in aad boorsooyinkooda, marka waxaan halkan kuugu soo bandhignay qodob kale oo weyn oo tareenka safarka ah iyo safarka diyaaradda, halkaas oo safarka tareenka Guuleystay!
safarka tareenka oo ay kasoo horjeeddo Safarka diyaaradda, Speed ​​- albaabka dhaqso albaabka
safarka Air la og yahay in uu noqdo mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan si ay u gaaraan meesha aad u socoto, si kastaba ha ahaatee, tani waxaa la qaadan oo keliya duulimaadka laftiisa tixgelin. Ilaa intee ka hor cararkiinnu samayn aad leedahay si ay u yimaadaan si ay u soo gudbaan dheer jeeg-in iyo line ammaanka? Haddii aad ka hubisay in bac waa inaad sugtaa in this ururiyaan marka aad timaaddo - waqtigan baabbi'iya. Si ka duwan garoomada diyaaradaha, saldhigyada tareen ma jiraan jeeg-INS ama khadadka ammaanka, sidaa darteed uma baahnid inaad in ay saacadood saldhigga ka hor dhoofkii. Inta badan xarumaha waaweyn ee tareenka ku yaalaan xaq qalbiga magaalooyinka waxay u adeegi. Badanaa marka aad tareenka, waxaad si toos ah timaado meesha aad u socoto. Si kastaba ha ahaatee, qaadashada diyaarad, waxaad bixisaan oo laga yaabaa in saacadaha helitaanka iyo ka garoonka diyaaradaha.
In tobankii sano ee la soo dhaafay, safarka tareenka ayaa si isa soo taraysa u soo jiidasho leh si ay u safar safar miyir-qaba. In kastoo qaadashada diyaarad si aad u socoto weli waa hab wax ku ool si ay u gaaraan meesha aad u socoto, waxaa jira kharash dheeraad ah in aan sida caadiga ah u dayacan inay tixgeliyaan. Marka la fiirinayo aad hab gaadiidka, waa in aad ku darto in kharashka dheeraadka ah ee helitaanka iyo ka garoonka diyaaradaha. Tani waxay sidoo kale ku lug leedahay qiimaha shidaalka iyo meelaha baabuurta la dhigto, ama bas garoonka diyaaradaha ama rakaab taxi. None of taas oo raqiis ah.
Munich in ay Tareenadu aabbo
Hamburg si Tareenadu aabbo
Hanover in Tareenadu aabbo
Frankfurt inay Tareenadu aabbo
Haddii aad bixisay ee fasal ganacsiga, sida caadiga ah aad meel la xadiday kursiga diyaarad. On tareen, aad u guurto karaa si xor ah oo dheeraad ah, oo waxaad yeelan doontaa legroom more agagaarka kuraasta aad. Inta lagu guda jiro cararkiinnu, waa inaad sugtaa calaamad suunka gaariga si dami ka yimid kursiga guurto. Si kastaba ha ahaatee, on tareen aad hoos u guurto hayirin, Boobka qaniinyo ama kafeega, iyo dunida daawashada tagaa by. A tareen kortaan muuqaal dabiici ah xitaa waxay noqon kartaa fasax ah. Tareenada yurubiyanka badankood waxay sidoo kale bixiyaan WiFi bilaash ah - wax aan wali laga dhihi karin dhamaan diyaaradaha.
safarka tareenka ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si raaxo leh u safri la xayawaanka aad caabuday. xayawaanka badan oo aan ku habboonayn in safarka hawada ay sabab u tahay caafimaadka, da'da ama sirdoonka.
rakaabka on tareenada Yurub qaadan kartaa eeyaha, bisadaha iyo xayawaanka kale ee yar yar oo iyaga la jira iyo wakhtiga intiisa badan ee wax kharash ah oo dheeraad ah!
Qaadashada arrimood oo dhan tixgelin, waa ay fududahay in la arko sida safarka tareenka ayaa noqonaya mid sii kordheysa maanta Adkaanno. Diyaarado waa habboon in aad ka hesho dalalka mile. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku safraysid agagaarka Yurub ama aagag kale oo leh gaadiid aad u wanaagsan, safarka tareenka waa hab wax ku ool ah oo raaxo gaadiidka.
Haddaba sidaas daraaddeed waxaan soo gabagabeeyey in goolkii guusha ee safarka tareenka oo ay kasoo horjeeddo safarka diyaarada, Si aad u hesho ah ugu wanaagsan ee lagu raaco tareenka in Europe, booqasho Save A tareenka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, Raac Kaydso Tareenka Facebook, Account Instagram iyo Twitter Akoonada.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / NL ama / iyo luuqado badan.
diyaarad planetravel tareen safarka